Tenin'ny mpitandrina RAKOTOHARINTSIFA Andrianjatovo noho ny Paska ary ny programan'ny fiangonana – FJKM Ambavahadimitafo Tenin'ny mpitandrina RAKOTOHARINTSIFA Andrianjatovo noho ny Paska ary ny programan'ny fiangonana |
Tenin'ny mpitandrina RAKOTOHARINTSIFA Andrianjatovo noho ny Paska ary ny programan'ny fiangonana
« Amin’izao andro paska izao dia faly miarahaba antsika rehetra vahoakan’Andriamanitra, nefa isika rehetra koa, izay mikitika izao takelaka izao.
Dia mirary ny fiadanan’ny Tompo ho aminareo; ary enga anie isika mianakavy tsirairay avy mba samy hihaona amin’Ilay nitsangan-ko velona, Izay vonona hanome fiainana ho antsika rehetra, raha mankasitraka izany isika. Ary raha manana finoana fa Izy no Ilay Masin’Andriamanitra izay nirahiny mba hanome antsika izany fiainana izany.
Dia mirary ny tohin’ny fiainantsika andavan’andro amin’izao 2007 izao.
Misy zavatra anankiroa azo ambara amintsika ato ho ato:
– Ny fifindran’ny fiangonana any amin’ny tempoly izay nohavaozina amin’ny alahady 06 mey 2007; amin’ny 9 ora sy sasany ny fanompoam-pivavahana amin’izany; ka dia amin’izay fotoana izay no hanokafana indray ny fiangonana ho toeram-pivavahana mahazatra
– Ny ezaka fitadiavam-bola mba ho entina miantsoroka ny fandaniana rehetra tamin’izany fanamboarana ny rihana sy fanavaozana tanteraka ny fiangonana izany; amin’ny alahady 10 jona eny amin’ny « Le Capitole« . Efa amidy izao ny fanasana amin’izany, ka dia manantena ny fandraisantsika anjara rehetra satria efa nalamin’Andriamanitra ny hahavitan’ny zavatra rehetra ao amin’io fiangonantsika io.